Ogaden News Agency (ONA) – Frankfurt oo Midabkii Dhalinta Ogadeniya Hadheeyay Iyo Calanki Ogadeniya oo ka babanaya Garomada iyo Boostejoyinka Germany
Frankfurt oo Midabkii Dhalinta Ogadeniya Hadheeyay Iyo Calanki Ogadeniya oo ka babanaya Garomada iyo Boostejoyinka Germany
Ururka Iyo Dhalinta Ardeyda Ogadeniya ee loo soo gaabiyo (OYSU) ayaa waxa uu qabanaya kalfadhigii ururka dhalinta ee labaad taariikhdu markay ku beegantahay 2 January illaa 6 January 2012. Shirkan oo ka dhacaya Magaalada Frankfurt ee wadanka Germany. Shirkan ayaa waxa bilowday safaradii looga imanayay qaaradaha kala gadisan ee aduunka iyada oo la filayo inay kasoo qeyb galaan boqollaal dhalinyaro ah oo kasoo kicitimay wadamada Scandenevianka iyo Qaarada Europe sidoo kale USA iyo Canada iyo Australiya iyo wadamo ka tirsan Afrika iyo Carabta.
Sida waraku nagu soo gaadhayaan Waxaa durba iska soo xaadiriyay maggaalada Frankfurt qeybo kamid ah wufuudi shirkaas oo kasoo baxay wadamada Scandenifianka, Holland siwtzeraland, Belgium iyo France. Halka wadanka UK ay kabaxeen wafti uu hormuud u yahay Maxamuud Cumar Jaango oo ka kooban xubno isugu jira xubnihii OYSU UK iyo waliba xubno kasocday wadanka Australia. Waxaa kale oo lasocda wariyaashi Barnaamijka Ilays oo kasoo diyaarin doona warbixino maqal iyo muqaal ah shirkan dhalinta OYSU.
Waxaana Goobaha laga soo daggo ee Garroonka Frankfurt iyo Boostejooyinka Tareemada iyo Busaska kasoo dagaya dhalinyaro trio badan oo lulaya calamadii Ogadeniya dharkooduna ku xardhanyahay midabka calanka Somalida Ogadeniya middaas oo si weyn uga muuqata goobaha dadku ka dhofaan.
Shirkan oo lafilayo waxtar weyn innu ka geysto horusocdka ururka dhalinta Ogadeniya ayaa lagu qiimeyn doona shaqooyinkii ururka mudadii uu jiray. Sidoo kale waxa lagu siin doona casharo ku saabsan maamulka iyo Advocayga la xidhiidha shaqooyinka dhalinta. Waxaana lagu dajinaya shaqooyinka Sanadka Soo socda iyo howlaha ururka oo qiimeyn guud lagu sameynayo mudadii koobneyd uu jiray.
Ururka OYSU oo bishii June 2011 gu jirsaday ayaa mudadaas sanadka ah ee ururku jiray isabadal weyn kusameyay shaqooyinka dhalinta isaga oo ururku ka hirgalay guud ahaanba 7 qaaradood islamarahaantaasna sameystay xarumo badan oo ururku ka howlgalo.
Waxqabadyadii ugu muhiimsana ee ururuku sameyay ayaa waxa aan kusoo qaadan karnaa sawiradan hoose oo aan kasoo xiganay 3 wadan oo kamid ah dhalinta OYSU sida wadanka Finland, Norwey iyo Sweden. Ururuka OYSU oo ah ururu u shaqeya heer qaaradeedeed iyo mid illaa heerwadan ayaa wadan kastaba waxa uu fulinayaya shaqo isku mid ah bilkasta oo uu kala mideysanyahay wadamada kale. midaas oo ururku uguc magacdaray Action Planka ururka. hadaba sawiradan hoose waxa ay miijinayaan shaqoyin kamid ah shaqooyinkii ururka OYSU oo ka kooban saaxibo u sameyn qadiyada somalida Ogaden, Abaabul guud oo loo sameynayo bulshada Somalida Ogadeniya dhexdooda, Abaabul Dhalinta dhexdooda ah iyo ururo caalami ah oo ururku la yeeshay xidhiidho herar meeqaankoodu sareeyo.